Home EGO AFRICAN FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ nke Cameroon Youssoufa Moukoko Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Anyị Biography nke Youssoufa Moukoko na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata, akụkọ mmalite, nne na nna, ezinaụlọ, enyi nwanyị / nwunye ka ọ dịrị, Ndụ na Ndụ Nke Onwe.
Na nkenke, anyị na-enye gị ihe ngosi nke akụkọ ndụ ya site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ndụ gị sie ike, nke a bụ oge mmalite ya iji bulie gallery - nchịkọta zuru oke nke Youssoufa Moukoko's Bio.
Youssoufa Moukoko Life Akụkọ.
Dịka onye hụrụ bọọlụ n'anya, ikekwe ị malitere ịnụ aha ya n'oge ahụ Borussia Dortmund wonderkid gbajiri ihe ndekọ ihe mgbaru ọsọ na BVB U17 na U19. Ikekwe n’oge ahụ, ị ​​malitere iji ya atụnyere C Ronaldo. N'agbanyeghị otuto ahụ, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole maara akụkọ ndụ ya, nke na-etinye aka. Na-ebughi n'ihu, ka anyị bido.
Youssoufa Moukoko Childhood Akụkọ:
Maka Biography ndị mbido, ọ na-aza aha, Koko. A mụrụ Youssoufa Moukoko na 20th ụbọchị nke November 2004 na nne ya, Marie Moukoko, na nna ya, Joseph Moukoko na Yaoundé, isi obodo Cameroon.
Nwa amaala ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama na mba Africa bụ onye agbụrụ German bụ otu n'ime ụmụ anọ nke ezinụlọ nuklia ya - nke a mụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya. Nna Youssoufa Moukoko na Mum - Joseph na Marie abụghị ndị si France, mana ụmụ amaala dị ọcha nke obodo ukwu West Africa (Yaoundé) nke aha otutu obodo nke nwere ugwu asaa.
Igwe ihe mgbaru ọsọ ahụ nọrọ afọ iri mbụ nke ndụ ya na-etolite ma hụ bọọlụ n'anya na ebe amụrụ ya na Yaoundé. N'oge a, nne na nna ya ochie, nne ya na nwanne ya nwoke nke okenye, (Borel) niile na-ele ya ka ọ na-etolite n'ime nwata nwere ọgụgụ isi. Ọ bụ ezie na ndị ezinụlọ Youssoufa Moukoko lere anya na ọ nwere ike, ha tụkwasịrị anya olileanya ha maka ọdịnihu dị egwu na egwuregwu ahụ.
Youssoufa Moukoko Ezigbo ezinụlọ:
Anyị ga-ekwupụta ebe a na onye na-elekọta ezinụlọ na nna ụlọ - Joseph bi na Germany dịka nwa amaala kemgbe 1900s. Daalụ ịdị mma ọ bụghị Papa na-anwụ anwụ.
N'ezie, nne na nna Youssoufa Moukoko (Joseph na Marie) maara nke ọma na njikwa ezinụlọ. N'oge ahụ, nna Moukoko na-ezigara mama ya Euro mgbe ụfọdụ maka nlekọta ezinụlọ, mmepe nke nyeere Moukoko aka ịzụlite klas dị ka ọtụtụ ụmụaka na Yaounde.
Youssoufa Moukoko Ezinaụlọ:
Ọ bụ ezie na a mụrụ Koko na mba Central Africa, wonderkid bụ nwa amaala German. … Nna ya, Joseph, debara aha ya na ụlọ ọrụ nnọchi anya German na Cameroon ozugbo amụrụ ya.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ nwere Africa ka edere ya na physiognomy ya niile n'ihi na ọ bụ 100% site na nne nna. Ndị nne na nna Youssoufa Moukoko bụ ụmụ amaala Cameroon na ezinụlọ ezinụlọ ya gbanyere mkpọrọgwụ na mba ahụ Yaounde agbụrụ agbụrụ.
Youssoufa Moukoko Na-akọwaghị Ọrụ Akụkọ nke:
Ka ọ na-erule oge ihe omume bọọlụ bụ 11, ndị mụrụ ya ekwenyela ka ọ gafee Germany, ebe ọ malitere igwu FC FC Pauli. Nke a malitere njem Moukoko na ịgba bọl. Lee, foto a na - adịghị ahụkebe nke ọgụgụ isi nke football mgbe ọ bịarutere FC St. Pauli.
Nke a bụ Youssoufa Moukoko n'oge nna ya kpọgara ya Europe.
N'ịbụ ebe ọ rutere n'ebe ahụ, nwatakịrị ahụ kwagara n'ime ihe ndị dị n'elu. Ọ ghọrọ onye ọkpụkpọ pụtara ìhè ugbu a maka ndị nọ n'okpuru 15-isi ihe mgbaru ọsọ 21 na egwuregwu 12 dị ka 11 afọ! N'ịchọpụta omume a na-enweghị atụ, papa ya, Joseph gara ịkwaga Borussia Dortmund, nke a hụkwara ọganihu nke ihe mgbaru ọsọ ya.
Afọ ndị mbụ na BVB:
Nwatakịrị ahụ agbanweela afọ 12 mgbe ọ na-enweghị mbibi na-ebibi ihe nchebe na ịkụda ihe mgbaru ọsọ maka ntụrụndụ Na otu B-U-15 nke BVB. N'ihi ya, ọ nwetara nkwalite na U-17s nke klọb ọbụlagodi tupu ọ ghọọ nwata!
Ọdịmma ya kachasị mma nke ụdị ihe mgbaru ọsọ yiri ka ọ ka mma na nkwalite ọ bụla, mmepe nke mere ọtụtụ ndị nwere obi abụọ ma ọ bụ n'ezie 12-afọ. N'ịzaghachi nsogbu gbara afọ nwata ahụ, nna ya, Joseph, nyere nkwupụta mesiri ike na:
“Afọ nwa m nwoke ziri ezi. Ozugbo a mụrụ ya, edebanyere m aha m na consulate na Germany na Yaounde. Anyị ji akwụkwọ ọmụmụ Germany. ”
Lelee nwa afọ iri na abụọ ahụ nke afọ ya ghọrọ isiokwu esemokwu.
Youssoufa Moukoko Biography - Roadzọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Mgbe nwa afọ Yaounde si U17 gaa U19s na mmalite nke oge 2019-2020, ọ maghị na ọ nọ na njedebe nke ịbụ onye ama ama. Na ọkwa ahụ, o nweela nkwado nke ndị nkuzi n'otu uwe na-acha odo odo na nke ojii.
Ọbụna onye njikwa ahụ na-atụgharị uche bụ Lucien Favre nke ama ama maka iwe iwe ndị nta akụkọ na nkwupụta okwu edoghị anya ghọrọ onye okwu ọma mgbe a gwara ya ka ọ kwuo maka Moukoko ndị Fans na-ele anya dị ka ndị kachasị ewu ewu Ndi ozo bu Borussia Dortmund.
Nke a bụ onye dị afọ iri na abụọ nke afọ ya ghọrọ ihe esemokwu.
Youssoufa Moukoko Bio - Rise To Fame Akụkọ nke:
Mgbe Koko chịrị n'okpuru 19 Bundesliga na UEFA Youth League na ihe mgbaru ọsọ, Koko malitere ọzụzụ na BVB nke mbụ na Jenụwarị 2020. Ọnwa ole na ole gachara na November, ọ mere mmalite ya maka Dortmund dị ka onye ngbanwe nkeji 85th maka Erling Braut Haaland imegide Hertha BSC.
Na mbido mbụ, Moukoko ghọrọ onye ọkpụkpọ kachasị nta na akụkọ egwuregwu nke Bundesliga. Obi abụọ adịghị ya, njem ya na bọl elu elu amalitela ugbu a na e nwere ọtụtụ isiokwu dị mma na-akwado ya.
Lee oge Youssoufa Moukoko mere egwuregwu mbụ ya.
Ọ bụ ezie na lifebogger.com ga-achọ ịkpachara anya na ịtụle ihe ọkpụkpọ ọ bụla Lionel Messi, anyi kwenyere na Moukoko bu ndi ozo. Dị ka Andre Onana, ọ na - eju anya na - ebi ndụ kwekọrọ na atụmanya nke ya ma ghara ikwe ka otuto rute ya ma ọ bụ nkatọ metụtara ya. Kedu otu ụzọ si kwụrụ maka ya, ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, gụnyere vidiyo ya gosipụtara n'okpuru, ga-abụ akụkọ ihe mere eme.
Ọnye na-bụ Youssoufa Moukoko Girlfriend?
Kedu ihe dịka ndụmọdụ ndụmọdụ enyi ma ọ dị mma? Ọ na-agwa onye nọ n’afọ iri na ụma ka ọ gbara afọ 16 inweta enyi nwanyị. Onye na-eme nke ahụ? Gị, ee! Oge eruola ka ị jụọ ma Moukoko nwere WAG ma ọ bụ enyi nwanyị. Ọ bụ nwata, maka ịgba bọọlụ. Youchọrọ ka ọ gbanye n'ọchịchịrị tupu ọrụ ya amalite?
Ka anyị chee na 16 afọ nwere enyi nwanyị. You ga-ajụ ajụjụ ma o nwere ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị? Anyị niile enwere ike ịnye nwatakịrị ohere iku ume? Daalụ, biko biko lelee oghere a maka mmelite mgbe ọ gbara afọ 18.
Enweghị ohere maka enyi nwanyị, ọbụnadị n'oche.
Youssoufa Moukoko Ndụ Ezinụlọ:
Ọ dị mfe ndị hụrụ ọchị ọchị ikwere na ọ bụghị nwanyị mụrụ nwanyị ahụ. N'ezie, ụfọdụ na-eche na o si ụwa ọzọ dị ka Superman si n'ụwa ma nwee ezinụlọ kuchiri. Mana anyi maara nke ọma ebe a. Akụkụ a na-ewetara gị akụkọ ndị ọzọ gbasara nne na nna Youssoufa Moukoko. Dika ozo, banyere umuaka ya na ndi ikwu ya.
Banyere ndị nne na nna Youssoufa Moukoko:
Anyị kwenyere na ị maara Marie na Joseph ugbu a. Ọbụghị na Akwụkwọ Nsọ, mana ha bụ akụkọ ndụ Youssoufa Moukoko. Dị ka anyị nwere ike ịgwa, Marie dị afọ iri abụọ na asatọ mgbe ọ mụrụ n'ihu. Ọ na-ele nwatakịrị ahụ tolitere bọọlụ hụrụ n'anya tupu ya ekwenye na di ya ịkwaga ya na Hamburg.
N'aka nke ọzọ, Nna Youssoufa Moukoko, Joseph, bụbu onye ọgba bọọlụ. Ọ dịrịla ndụ ogologo oge na Germany iji tozuo maka ịzọ ọkwa nke Onye isi ala na mba ahụ. Mgbe Moukoko afọ bụ isiokwu nke arụmụka, ọ jiri aghụghọ kwuo na onye nọ n'afọ iri na ụma bụ onye na-adịghị mma, na-ekwusi ike na ya mere nke ọma karịa ya n'otu afọ ahụ.
Banyere ụmụnne nwanne Youssoufa Moukoko:
A kọrọ na onye ama ama ama ama ama ama Cameroon nwere ụmụnne anọ, mana anyị maara naanị otu. Ọ bụ nwanne nwanne Moukoko, Borel. Nwanne ahụ na-abanyekwa n'egwuregwu bọọlụ ma na-egwuri egwu maka ọgbakọ German bụ Schwarz-Weiß Essen kemgbe 2019.
Banyere ndị Youssoufa Moukoko ikwu:
Ewezuga ezinụlọ ezinụlọ Cameroon, enweghị ndekọ nke nna nna ya. Dị ka ndị na-agụ akwụkwọ anyị a ma ama, anyị chọrọ ịma ma nne na nna nne Koko bụ ndị amamihe bọọlụ.
Ndi umunne ya na umu nne ya huru egwuregwu a n'anya? Mgbe ahụ ọ ga-enwerịrị nwanne nwanne nna ya na-eme ebili mmiri n'akụkụ ebe, nri? Ikekwe ee ma ọ bụ mba. Enwere ọtụtụ ịmata ihe anyị chọrọ iju, n'agbanyeghị na anyị anaghị eme ọsọ ọsọ ịchọpụta ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya.
Youssoufa Moukoko Ndụ Nke Onwe:
Isnye ka ọ bụ nke na-eti ndị mmadụ ihe dịka ụwa na onye nwere nzube, n’enweghị isi-nzuzu n’isi ya? Ee, ikwuru nke oma, Moukoko! Ọ bụ onye nwere mmụọ nweere onwe ya iji ịhụnanya mee ihe niile, gụnyere ịse foto.
Ọ bụ ezie na BVB gbalịrị ọtụtụ ihe iji kpuchido ya site na ọtụtụ mgbasa ozi, ike ya na akparamàgwà mmụọ ekwuwo nke ọma banyere ya karịa otu narị ajụjụ ọnụ ga-eme. Onye na-eto eto na-enwe mmasị iji ụgbọ mmiri na-agba ọsọ na igwu mmiri. Tụkwasị na ndepụta nke ihe omume ntụrụndụ ya bụ iso ndị ezinụlọ na ndị enyi nọrọ ezigbo oge. Ọ bụghị na ọ bụ talent dị egwu?
Nwere ike ịhụ ya ka ọ na-eme otu n'ime ihe omume ntụrụndụ ya?
Youssoufa Moukoko Web site:
Ikpochi 16 emeghị ka Koko ruo eruo ịmalite egwuregwu ya. Afọ ọhụrụ wepụrụ ọtụtụ ihe mgbochi na ndụ ya. Ya mere, ọ nwere ike ịnweta akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala maka obere ụgbọ ala na ọgba tum tum - gụnyere ịkwọ ụgbọala gburugburu obodo ahụ ruo etiti abalị. O nwekwara ike tinye ntuli aka ya na ntuli aka ime obodo ma mepee akaụntụ na akụ.
Kedu ihe kpatara akaụntụ ụlọ akụ ji dị mkpa? O nwere ihe ruru 500 Euro ma chọọ ịdebe akụ na ụba ngwa ngwa ya. Moukoko nwere nkwekọrịta ya na Nike iji kelee ya maka nnukwu akụ na ụba ya n'ihi na ọ na-akpata mmejọ na-esite na 250 Puku Euro nke BVB na-akwụ ya dị ka nke November 2020.
E nwere ohere 99% nke Moukoko enweghị ala na aha ya. O nweghi ugbo ala na ulo ugbua. N’ụzọ doro anya, ọ ga-a havea ntị na ndụmọdụ ndị otu onye na-asụ French ibe ya nyere ya Pierre-Emerick Aubameyang, bụ ndị ọ zutere n'oge ahụ na Dortmund.
Ugbu a, ị matala onye ọ na-eso nzọụkwụ ya.
Eziokwu efu banyere Youssoufa Moukoko:
Iji mechie mpempe akwụkwọ akụkọ Koko a, ebe a bụ ihe amachaghị ma ọ bụ eziokwu efu banyere ya.
You Ebe ezinụlọ ya si (Cameroon), nwa amaala ọ bụla ga-arụ ọrụ maka afọ 29 na ọnwa 8 iji kwụọ ụgwọ Moukoko (November 2020) kwa afọ na Dortmund.
Kwa Afọ € 250,000
kwa ọnwa € 20,833
Kwa Izu € 4,800
Kwa .bọchị € 686
Kwa elekere € 29
Nkeji nkeji € 0.48
Sekọnd € 0.008
Ebe ọ bụ na ị malitere ile Youssoufa Moukoko'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Eziokwu # 2 - Onye a na-emekpa agbụrụ:
Ọtụtụ mgbe, ndị otu egwuregwu na-emegide ya na-enwe nkụda mmụọ maka otu esi atụ ọtụtụ goolu megide ha. N'okpuru ndị ntorobịa n'okpuru 19 megide Schalke, ndị Fans tụbara abụ olu agbụrụ niile n'aha ịda mba. Obi dị m ụtọ, Moukoko zara site na ị nweta akara okpu nke mechiri ha, na Schalke rịọrọ mgbaghara mgbe egwuregwu ahụ gasịrị.
Eziokwu # 3 - Okpukpe Youssoufa Moukoko:
Ọ na-egosi n'echiche anyị banyere onye onye nne na nna ya kpọrọ aha Ndị Kraịst na-eme Islam. Ikekwe ọ dịghị ihe kpatara ihe ijuanya ebe ọ bụ na aha mbụ ya Youssoufa bụ ụdị dị iche iche nke Yusuf, ọ bụ eziokwu?
Eziokwu # 4 - FIFA 2020 Fim:
FIFA ka kwubeghị Youssoufa Moukoko eze. Ihe o nwere bụ akara ahaziri nke akara 72 na maa amụma?… akara ngosi ya nwere nke 92 bụ isi abụọ dị n'elu Samuel Etoo's kasị elu FIFA mba. Anyị na-atụ anya na FIFA ga-enwe ike ma bulie mkpokọta nke ọtụtụ chere na ọ dabara maka nwata nwoke ahụ.
Anyị kwenyere na ụbọchị ndị ka mma dị n'ihu. Kedu maka gị?
Daalụ maka ịgụ mpempe akwụkwọ a na akụkọ ndụ Youssoufa Moukoko na akụkọ nwata. Anyị nwere olile anya na ọ kpalitela gị ikwenye na ịdị ukwuu abụghị afọ ole, dị ka ọsọ Moukoko nwere pụtara. Eziokwu bụ, ndị mmadụ dị ka akụkọ ifo Rigobert Song ga-enwe obi ụtọ na ya na-egwuri egwu maka Ọdụm Indomitable - ma na-ebi ndụ nrọ ya si ebe ọ kwụsịrị.
Ọzọkwa, ọ dị anyị mkpa ugbu a ịja ndị nne na nna Youssoufa Moukoko mma maka ịghara ịgbachitere ya megide ndị nkatọ afọ na ịgba ya ume ime nke ọma. Chekwa afọ ndụ ya dị mma, mana na-aza ịkpa ókè agbụrụ na okpu-atọ na-egosi na ọ bụ onye egwuregwu bọọlụ na-enweghị isi.
Na lifebogger, anyị na-anya isi na ị na-enyefe akụkọ nwata yana akụkọ ndụ eziokwu na izi ezi. Y’oburu n’ichoo ihe obula n’adighi ka nma, kpachara anyi. Ma ọ bụghị ya, gwa anyị ihe ị chere banyere ya na ngalaba nkọwa. Akwụkwọ Wiki anyị ga-enyere gị aka ịnweta nchịkọta Youssoufa Moukoko's Bio.
Aha zuru ezu: Youssoufa Moukoko.
aha otutu: "Koko."
Age: Afọ 16.
Ụbọchị ọmụmụ: Thbọchị asaa nke ọnwa Nọvemba 20.
Ebe amụrụ onye: Yaoundé, isi obodo Cameroon.
Ogo n'ogo: 5 Ugbo, 9 Inches.
Elu na Cm: Udo 179 Cm.
Ndị nne na nna: Marie (nne), Joseph (nna).
Ụmụnne: Borel (nwanne nwoke okenye).
Nwa nwanyi: Nil
Ihe omume: Gba ụgbọ mmiri na-agba ọsọ, igwu mmiri, soro ezinụlọ na ndị enyi nọrọ ezigbo oge.
Ezigbo Net: 500 puku Euro
Raphael Guerreiro Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Achraf Hakimi Childhood Story Plus Ihe Ndi Utold Biography Eziokwu
Andriy Yarmolenko Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Erling Braut Haaland Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Alexander Isak Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ifiedbọchị agbanwee: November 21, 2020
Bọchị agbanwee: Disemba 11, 2020
Bọchị agbanweela: Machị 1, 2021